Margarekha शरीर थकाइ लाग्यो ? तत्काल फ्रेस हुने यस्तो छ उपाय – Margarekha
शरीर थकाइ लाग्यो ? तत्काल फ्रेस हुने यस्तो छ उपाय
जिन्दगी व्यस्त छ । दौडादौड छ । तिब्र प्रतिश्पर्धामा खरो उत्रन मेहनत पनि उस्तै गर्नुपर्छ । उता शरीरको आफ्नै विज्ञान हुन्छ । मन थाक्दैन, तर शरीर थाक्छ । किनकी, अफीसमा काम गर्दागर्दै तपाइको शरीरमा उर्जाको कमी हुन थाल्छ र तपाइलाई थकान महसुस हुन्छ । आजको भागदौडयुक्त जिवनमा थकान सबैलाई हुने गर्छ । कसैलाई हरेक दिन थकान महसुस हुन्छ भने कसैलाई कहिलेकाही मात्र थकान महसुस हुनेगर्छ । यदि तपाइ कार्यालयमा काम गरीरहनुभएको छ र थकान महसुस भयो भने के गर्ने ? यहाँ केही आइडीया दिइएको छः
सिधा उभिनुस् । दुबै हातलाई सिधा आकाशतर्फ फर्काएर तनक्क तन्काउनुस् र तन्कीएकै अवस्थामा शरीरलाई अगाडीतर्फ ‘यू’ आकारमा निहुँराउँदै हातले दुबै गोडाका औंला छुने कोशीस गर्नुस् । अब यही पोजीजसनमा दुबै हातमा कम्पन ल्याउनुस् । अर्थात कामे झैं गरेर हातहरु हल्लाउनुस् र हल्लाउँदै हल्लाउँदै सिधा खडा हुनुस् । हात हल्लाउने क्रम जारी राख्नुुस् र सोही पोजिसनमा दायाँ र बायाँ पालै पालो निहुरीदै माथि उठदै, निहुँरीदै माथि उठदै गर्नुस् । यसो गर्दा शरीर तरँगीत हुन्छ । त्यो तरँगले शरीरका कोषहरुमा नयाँ उर्जा, उत्साह र स्फुर्ती ल्याउँछ । शरीरमा यसबाट हुने रासायनिक प्रतिक्रियाबाट निराश र थकित मनमा समेत प्रफुल्लीत हुन्छ ।
नाचगान हुँदा जसरी तपाइ आनन्दका साथ ताली बजाउनु हुन्छ, ठिक त्यसैगरी करीब पाँच मिनटसम्म उप|mदै ताली बजाउनुस् । ताली बजाउँदा हाम्रो हत्केलामा एक्कुप्रेशर हुन्छ र यसले शरीरमा नयाँ स्फुर्ती ल्याउँछ । हाम्रो शरीरमा स्टोर रहेको उर्जा रिलिज हुन्छ र शरीर मानौं रिचार्ज हुन्छ ।
थकान महसुस भएमा बसेको ठाउँबाट उठेर यताउता डुल्नुहोस् । आफ्नो वरिपरि १० मिनेटमात्र डुल्ने हो भने पनि तपाईलाई दुई घण्टाका लागि उर्जा प्राप्त हुन्छ ।
किनकी एक छिन यताउता डुल्दा मात्र पनि दिमाग तथा मांसपेशीलाई अक्सिजन मिल्छ, जसले गर्दा शरीर उर्जवान हुन पुग्छ ।
कहिलेकाँही कम उर्जाले मात्र हैन, धेरै उर्जाले पनि आलस्य या थकान महसुस गराउँछ र वर्किङ आवरमा निद्रासमेत लाग्नसक्छ । कार्यक्षेत्रमै कतिपय मानिसहरु झुलीरहेका हुन्छन् । भोक लागेको खण्डमा हामी एकैपटक धेरै खान्छौं, जसले पनि थकान महसुस गराउँछ । त्यसैले, सकेसम्म ठिक मात्रामा भोजन गर्ने । बरु थोरै थारै खाने बानी गर्ने । खाना खादा सानो सानो टुक्रा बनाएर खाने ।
स्वस्थ खाजा रोज्नुस्
यदी तपाईमा आलस्य छ र थकान महसुस गरिरहनु भएको छ भने स्वस्थ खाजा खान सक्नुहुन्छ । खासगरी चिनिको मात्रा कम भएको खाजा उत्तम हुन्छ । तारेका भुटेको परिकार पनि स्वास्थ्यका लागि हानीकारक हुनसक्छ । काजु, किसमिस, बदामलगायतका चिज तपाईको रोजाईमा पर्नसक्छ । यसले शरीरमा उर्जा प्रदान गर्नुका साथै शरीरमा आवश्क मल्टी भिटामीन र खनिजको कमी पुरा गर्छ ।
गहिरो सास लिनुस्
घरिघरि थकान महसुस भएको छ भने लामो लामो तथा गहिरो सास लिएर पनि शरीरलाई आराम दिन सक्नुहुन्छ । पेटमा दवाव दिएर गहिरो सास लिने कोशिश गर्नुस् । गहिरो सास लिएको खण्डमा शरीरमा रक्त सञ्चार राम्रोसित हुन्छ, मुटुको धडकन कम हुन्छ र रक्तचाप कम हुने गर्छ । यसले शरीर तथा दिमागलाई उर्जा प्रदान हुन्छ ।
नयाँ काम गर्नुस्
लगातार एकै किसिमको काम गर्नाले पनि थकान महसुस हुने गर्छ । त्यसैले थकान लागेमा केही समयको लागि केही अलग गर्ने प्रयास गरौ । वा गरिरहेको कामलाई छोडेर केही नयाँ काम गर्न थालौ । यसो गर्दा दिमाग केही सक्रिय हुन्छ र थकान भाग्छ ।
गीत, संगीत सुन्नुहोस्
१ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:५६ प्रकाशित